आर्थिक Archives – Page6of 235 – Samacharpati Samacharpati आर्थिक Archives – Page6of 235 – Samacharpati
यस्ताे छ आज बुधबारकाे विदेशी मुद्राको विनिमय दर
काठमाडौं, २९ पुस । नेपाल राष्ट्रबैकंले आजका लागी विदेशी मुद्राको विनिमय दर तोकेको छ । राष्ट्रबैकंका अनुसार आज अमेरिकी डलरको खरिद दर ११६.९२ रुपैयाँ रहेको छ भने बिक्री दर ११७.५२ रुपैयाँ रहेको छ । यूकेको पाउन्ड स्टर्लिङको खरिद दर १५९.०२ रुपैयाँ रहेको छ भने बिक्री दर १५९.८४ रुपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै, युरोपियन युरोको खरिद […]
पोखरा वडा नं. २९ र ३० मा नेलम्बो नेपालको सहयोग
पाेखरा, २८ पुस । आज एक कार्यक्रमका बीच नेलम्बो नेपालले पोखरा महानगर पालिका वडा नं. २९ वडा कार्यालयलाई कोभिड—१९ बाट सुरक्षित रहनका लागि माक्स, सेनिटाइजर, केएन ९५ माक्स, डिस्पोजिवल माक्स, फेससिल्ड, हेण्ड फ्रि सेनिटाइजर स्ट्याण्ड, हात धुने साबुन, स्प्रेबोतल, थर्मल गन लगायतका स्वास्थ्य सुरक्षाका सामग्रीहरु वडा अध्यक्ष चेत बहादुर गुरुङ्गलाई संस्थाका जनसम्र्पक अधिकृत भीम प्रसाद […]
पोखरा, २८ पुस । लायन्स क्लव अफ पोखरा सेन्टेनियलले पोखराका सामुदायिक बिद्यालयहरुको लागि ५० हजार वटा मास्क वितरण गरेको छ । क्लवले एक समारोहका बिच आइतबार बाराही वेकरीको परिसरमा पोखराका २० वटा सामुदायिक बिद्यालयलाई उक्त मास्क वितरण गरेको हो । प्रति बिद्यालयलाई २ हजार ५ सय वटा मास्क वितरण गरिएको क्लवका अध्यक्ष प्रगत कायस्थले बताउनुभयाे […]
नेलम्बोद्धारा रुपा गाउँपालिकालाई सहयोग
पोखरा, २८ पुस । गैह्रापाटन स्थित नेलम्बो नेपालले शिक्षा स्वास्थ्य र वातावरणको क्षेत्रमा विगत ३ वर्ष देखि काम गर्दै आइरहेको छ । हाल विश्वप्यापी रुपमा फैलिएको कोभिड–१९ को विषम् परिस्थितिमा स्वास्थ्य सुरक्षाका सामग्रीहरु हस्तान्तरण गरी कोभिड–१९ रोग व्यवस्थापन तथा नियन्त्रणमा ठूलो टेवा पुर्याउँदै आइरहेको नेलम्बो नेपालले पछिल्लो समयमा विद्यालयहरु भौतिक रुपामा नै सञ्चालन भई रहेको […]
दर्शन बचत तथा ऋण सहकारीको अध्यक्षमा बिष्णु उच्चै ठकुरी
पोखरा, २६ पुस । दर्शन बचत तथा ऋण सहकारी सहकारीको १० औं साधारण सभा तथा चौथो अधिवेशनले बिष्णु उच्चै ठकुरी अध्यक्षतामा नयाँ सञ्चालक समिति चुनेको छ । समितिको उपाध्यक्षमा राजाराम शाही, सचिव फम सिंह, कोषाध्यक्ष लक्ष्मण मल्ल, सह सचिव ज्योति हमाल, चित्र बहादुर मल्ल, दिलकुमारी खाँण, आशा सेन, लक्ष्मी मल्ल, लक्ष्मी कुमारी खाँण, मैना सेन […]
काठमाडौं, २६ पुस । नेपाल राष्ट्रबैकंले आजका लागी विदेशी मुद्राको विनिमय दर तोकेको छ । राष्ट्रबैकंका अनुसार आज अमेरिकी डलरको खरिद दर ११६.८९ रुपैयाँ रहेको छ भने बिक्री दर ११७.४९ रुपैयाँ रहेको छ । यूकेको पाउन्ड स्टर्लिङको खरिद दर १५८.८७ रुपैयाँ रहेको छ भने बिक्री दर १५९.६९ रुपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै, युरोपियन युरोको खरिद […]
लायन्स गतिशिल मञ्जरीको विद्यालयलाइ न्यानो कपडा सहयोग
पोखरा, २५ पुस । लायन्स क्लब अफ गतिशिल मञ्जरीले अकला आधारभूत विद्यालयमा न्यानो कपडा वितरण कार्यक्रम शनिबार सम्पन्न गरेको छ । पोखरा १९ लामाचौरस्थित विद्यालयका ३० विद्यार्थीलाई न्यानो कपडा वितरण गर्दै को चिफ एड्भाइजर विनोद ढुङ्गानाले ग्रामीण भेगका विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुलाई लायन्स गतिशिल मन्जरीले गरेको कार्यक्रमको स्वागत र समर्थन गर्दै प्रशंसा गर्नुभयो । अर्का को […]
गलकोट नगरपालिकाले वडाअनुसार साना कृषि उत्पादन केन्द्र ‘पकेट क्षेत्र’ घोषणा
बलेवा, २५ पुस । कृषि र पशुपालन स्वरोजगारीका लागि उत्तम पेशा हो । बजार र उपभोक्ता प्रशस्त रहेकाले कृषिउपज र पशुजन्य उत्पादन गर्नेका लागि राम्रो अवसर छन् । यस्ता अवसरको पहिचान र उपयोगमा पछिल्लो समय स्थानीय सरकारले चासो देखाउन थालेका छन् । कोरोना महामारीले थला परेको रोजगारीको क्षेत्रबाट विस्थापितलाई कृषि र पशुपालन व्यवसायमा अकर्षित गर्नका […]
म्याग्दी, २५ पुस । म्याग्दीको धौलागिरि गाउँपालिका–६ मराङका पहिरो पीडितको पुनःस्थापनाका लागि जग्गा व्यवस्थापन भएको छ । गत असार २५ र २६ गतेको पहिरोका कारण घरवास गुमाएकाको पुनःस्थापनाका लागि वडा कार्यालयले स्थापना गरेको विपद् व्यवस्थापन कोषमा सङ्कलित रकमबाट २१ रोपनी जग्गा व्यवस्थापन भएको हो । वडाध्यक्ष राजाराम सुवेदीले थप छ रोपनी जग्गा प्राप्तिको प्रक्रियामा रहेको […]
पोखरा, २५ पुस । महाविर पुनको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई निजी विद्यालयको छाता संस्था प्यावसन कास्कीले नगद १० हजार सहयोग गरेको छ। प्यावसनको ३१ औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा कास्की प्यावसनले सामाजिक उत्तरादायित्व अन्तरगत उक्त रकम हस्तान्तरण गरेको प्यावसन कास्कीले जनाएको हो । प्यावसन कास्कीले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा कार्यक्रमका प्रमुख अतिथी पोखरा विश्वविद्यालयका उपकुलपती प्रा.डा. प्रेम नारायण […]